Nhau - Foregene yakabudirira kupedzisa Series A mari
Musi waNovember 20, 2020, Foregene Co, Ltd. uye Shenzhen Shangyang Asset Management Co, Ltd. (ino inonzi Shenzhen Shangyang) yakasaina chibvumirano chakakosha chekudyara. Shenzhen Shangyang akaita akateedzana A kudyara kwemamirioni akati wandei RMB muForegene, uye kudyara kwakapedzwa nguva pfupi yadarika.
Foregene Co., Ltd. yakavambwa muna Kubvumbi 2011. Iyo kambani inotarisa kune hunyanzvi mamorekuru biology tekinoroji R&D uye chigadzirwa chigadzirwa. Iyo Direct PCR patent tekinoroji yakagadziriswa na Foregene inotungamira iyo indasitiri uye ine hukuru hwekushandisa tarisiro mumunda wema molecular diagnostics. Mu2016, Foregene akasarudza chechitatu-chekurapa hunyanzvi nzvimbo yeChengdu Medical Guta, Wenjiang Ruwa, Chengdu, uye ndokugadzira chikamu chose-chevaridzi, Chengdu Forge Biotechnology Co, Ltd. (www.foreivd.com). Shanduko mumunda wema molecular diagnostics. Iyo kambani yakawana dzinoverengeka dzepamba dzekugadzira patent uye epasirese patent. Zvichienderana neiyo Direct PCR tekinoroji, Foregene yakagadzira "gumi nemashanu yekufema system pathogenic mabhakitiriya ekuona kit". Iyo kit inogona kuona 15 marudzi eepathogenic mabhakitiriya mu sputum pasina kukosha kwekuchenesa iyo nucleic acid mu sputum. Mushure mekusimbiswa nenzvimbo dzinoverengeka dzakakurumbira dzekurapa, iko kushanda kweiyo kit kuri nani zvakanyanya kupfuura echinyakare nzira dzetsika dze sputum tsika. Panyaya yekushanda, inopfupisa iyo yekutanga mazuva matatu kusvika mashanu kusvika maawa 1.5. Zvinotarisirwa kuti mushure mekunge chigadzirwa chabvumidzwa kushambadzira, chinozoisa bhenji nyowani yekuonekwa kwekiriniki yepathogen pasirese, ichipa hwaro hutsva hwekurapwa kwakakwana kwehutachiona hwekufema, nekubatsira kugadzirisa nyaya dzekuchengetedza veruzhinji dzekushorwa kwemishonga inorwisa mabhakitiriya uye kuramba kwebhakitiriya.
Pakutanga kwa2020, mukupindura denda re COVID-19, Foregene akapedza kuvandudza seti yakazara yemakona matsva ekuona coronavirus nucleic acid mumazuva mana chete, ichiva imwe yemakambani maviri ekutanga kumadokero kweChina kugadzira ichi chigadzirwa. Zvigadzirwa zve Foregene hazvidi kuchenesa hutachiona nucleic acid kuti uone nyowani coronavirus nucleic acid. Parizvino, kit yacho yakaendeswa kunze kwenyika dzakawanda kusanganisira Spain, France, Iran, Brazil, Bangladesh, Indonesia, Kazakhstan, nezvimwe.
Shenzhen Shangyang Asset Management Co, Ltd. yakavambwa muna Ndira 26, 2016. Iyo yakavanzika equity fund maneja akanyoreswa neChina Fund Association. Kubva payakavambwa mu2016, timu yakateedzana kutora chikamu mukutungamira kweakawanda equity mari uye eepropship capital fund mapurojekiti, necumulative manejimendi sisitimu inopfuura 2 bhiriyoni yuan. Idzo nzvimbo dzekudyara dzinosanganisira kugadzira mishonga yemishonga, kugovera mishonga, tsika yekushanya kwezvivakwa uye mota nyowani dzemagetsi, nezvimwe.
Zvichienderana nehunyanzvi hwakawanda hwemaseru ekuongorora matekinoroji kusanganisira Direct PCR tekinoroji, Foregene ichaenderera mberi nekuvandudza zvimwe hutachiona hutachiona hwekuona zvigadzirwa uye zvigadzirwa zvinotsigira, uye vanotarisira kupa njere nesimba reForegene kuhutano hwevanhu.